Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo Cadaado Gaaray – Radio Daljir
Abriil 20, 2015 9:29 b 0
Isniin, Abriil 20, 2015 (Daljir) — Wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud, halkasoo uu ka socdo shir lagu dhisayo maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Xubnaha wasiirada ah ee maanta gaaray Cadaado waxaa ka mid ah; wasiirka qorsheynta & iskaashiga caalamiga ah, C/raxmaan Caynte, wasiir-u-dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha, C/raxmaan Kulmiye Xirsi iyo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda, Axmed Cali Kadiye.
Wafdigan ayaa waxaa Cadaado kusoo dhaweeyay xubno uu ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha Somalia, C/raxmaan Maxamed Xussen (Odawaa) oo todobaadyadan ku sugnaa degmadaas iyo xubnaha maamulka degmada.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in wasiirradan ay Cadaado u tageen sidii ay u dar-dar-gelin lahaayeen shirka lagu dhisayo maamulka Galguduud iyo Mudug, inkastoo aysan iyagu la hadlin warbaahinta.
Qaar ka mid ah wasiirradan maanta gaaray Cadaado ayaa waxaa ka mid ah wasiirro ka mid ahaayeen wafdigii madaxweynaha Soomaaliya markii uu ku tagayay booqashada gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya.
Ugu dambeyn, safarka ay wasiirradan ku tageen Cadaado ayaa imaanaya xilli la filayo in la soo xulo ergooyinkii dooran lahaa madaxweynaha uu maamulka gobollada dhexe ee dalka uu yeelan lahaa.